Ngathi-SHENZHEN FUXINGYE UKUNGENISWA KWENZIMA NOKUTHUTHELWA KWANGAPHANDLE CO., LTD
I-SHENZHEN FUXINGYE YOKUTHENGA NOKUTHUNYELWA KWENKXASO, LTD
Inkampani yethu esekwe ngo-1996, umzi-mveliso owakhiwe ngo-2010, ubekwe kwisithili saseLonggang, eShenzhen, kwiphondo laseGuangdong. Efektri yethu eneemfuno ezizodwa ekuveliseni kwibakala eliphezulu okanye eliphakathi porcelainware okanye ilitye zeebhaka, yendalo ceramic friendly.
Phantse 100 abasebenzi bebonke
Imveliso yenyanga nenyanga: 1.5-1.8 yezigidi zeepc
Ukuhambisa izitya ezingama-60-70 ngenyanga
Inkampani yethu kunye nomzi mveliso sele zivumile i-DISNEY, BSCI, SEDEX kunye nesiQinisekiso seNkqubo yoMgangatho. ISO9000-2005. Okwangoku, kufuneka mveliso steel stainless apho ibekwe JIEYANG, kwiphondo Guangdong. Sinikezela ngemigangatho eyahlukeneyo yeseti yeplastiki engenasici epheleleyo, izixhobo zasekhitshini kunye nezinye iitafile zentsimbi.
Siyaxhasa ukubonelela abathengi ngeemveliso ezisemgangathweni, ukuhambelana nomgaqo woyilo kuqala, umgangatho wokuqala, ixesha lokuhambisa ngexesha, ukubonelela abathengi behlabathi ngeempahla ezonelisayo kunye neenkonzo.
Kwangelo xesha, sineqela elinamandla lomyili.
Kukho abaqulunqi abazii-4 kwinkampani yethu. Ngeli xesha, umyili wexeshana ovela kulo lonke ihlabathi njengeFrance, iAustral, i-Itali, iTurkey, iHong Kong njalo njalo. Rhoqo kwiinyanga ezi-2 siza kuphehlelela ubuncinci i-20 yoyilo olutsha kwiimarike ezahlukeneyo. Ngokusekwe kubuchule bokuyila obomeleleyo, sihlala sikhokela umkhwa. Kungenxa yoko le nto abathengi abaninzi abasemgangathweni basebenzisana nathi.
Kukho abathengi abaninzi abasithembayo ixesha elide elivela eYurophu, e-USA, e-Australia, eMpuma-Asia, eTurkey, e-Dubai, eRashiya njalo njalo. Sinikezela ngenkonzo yenyathelo eli-1 kwabo bathengi. Ukusuka koyili ukuya kwiisampulu, uku-odola kungqina ukuhambisa kunye nokudibanisa iimpahla ezahlukeneyo kwindawo yokugcina izinto. Sinikezela ngenkonzo ecingisisiweyo kunye neenkcukacha.
Imizi-mveliso yethu sele idlulisile inkqubo yolawulo lomgangatho ISO9000-2005. Silandela imigangatho ngokungqongqo ukuze siqiniseke ngemveliso nganye ikwimeko entle.
Sizigoba ekuyileni izinto ezintle ngakumbi nangakumbi kumthengi wethu wonke ngexabiso elixabisekileyo kunye nenkonzo ebalaseleyo.
Ubomi bomgangatho wokuyila!